Traffic-light system yakamisa zvikamu zviviri muzvitatu zveBrits kuenda mhiri kwemakungwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Traffic-light system yakamisa zvikamu zviviri muzvitatu zveBrits kuenda mhiri kwemakungwa
Nekubviswa kweamber tier, ichisiya yakatsvuka uye yakasvibira chete. Izvo zvicharamba zvichionekwa kana danho iri richaita kuti vavimbe pakati pevaBrits vanoda kuenda kunze kwenyika pazororo.
Zvikamu zviviri muzvitatu zveBrits zvinopomera traffic-light system nesarudzo yavo yekusatora zororo remhiri kwemakungwa mugore rapfuura, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Pane avo vasina kuenda kunze kwenyika pazororo mumwedzi gumi nemiviri yadarika, 12% vakapindura kuti 'hongu' kumubvunzo: Ko iyo traffic light system yakaunzwa nehurumende yeUK yekufamba mhiri kwemakungwa yakakutadzisa kuenda mhiri kwemakungwa mugore rapfuura here?
Payakaunzwa, iyo traffic-light system yakarumbidzwa senzira iri nyore kunzwisisa yekuti Hurumende itore nzvimbo dzekuenda zvichienderana neCovid statistics, uye kuona kuti vanhu vanopinda muUK vaizofanira kugara vega here kana kuti kwete.
Nekudaro, pakanga paine akati wandei enzvimbo dzakadzoserwa kuita amber kana tsvuku, zvichikonzera mhirizhonga pakati pevaienda kuzororo vaingopihwa maawa makumi mana nemasere kana makumi manomwe nemaviri kuti vasvike kumba, kana vaifanira kukanzura zvirongwa zvavo. Pamusoro pezvo, Hurumende yakaunza imwe nhanho - iyo 'green watch' runyorwa, rwenzvimbo dziri munjodzi yekushanduka kuita amber.
Vakapindura vakaudza WTM Indasitiri Report yekusagadzikana kwe traffic-light kwakavatadzisa kufamba mumwedzi gumi nemiviri yapfuura.
"Boris Johnson haakwanise kuita pfungwa dzake kubva pane imwe miniti kuenda kune inotevera kuti nyika dziri muvara ripi. Izvozvi hazvina kukodzera kuenda kunze kwenyika izvozvi,” akadaro mumwe akapindura.
Mumwe akatsanangura kuti: "Ini handidi kubhadhara mari yakawanda yekuongororwa neCOVID uye kuvharirwa mumba kuti ndigare ndega."
“Zviri kusanduka nekukasika uye zviri kuvhiringa – Hurumende ine hutsinye uye haizive zvairi kuita. Boris anofuratira kubva kune imwe sarudzo isina kufungidzirwa kuenda kune imwe, "mumwe mupinduri akadaro.
Wechina akatsanangura kuti vakamiswa netraffic-light system: "Nekuti vanoshandura sisitimu pasina chiziviso zvachose saka unogona kuzviparadzanisa pasina chiziviso."
Pakati pevakasara muvatatu veBrits vasina kuzororo mhiri kwemakungwa mumwedzi gumi nemiviri yapfuura, vamwe vakati vaisanzwa vakachengeteka nezvekufamba.
“Ingozi yakawandisa saka sarudza kumirira. Haisi iyo traffic light system, Covid yatimisa,” akadaro mumwe.
WTM London inoitika mumazuva matatu anotevera (Muvhuro 1 - Chitatu 3 Mbudzi) kuExCeL - London.
Mukuru weWTM London Exhibition Director Simon Press akati: "Iyo traffic-light system yakaitirwa seyakareruka vhezheni ye2020 yekufamba corridor system - asi muchokwadi, yakazove yakaoma, pamwe zvakanyanya.
"Ndege, vatyairi nenzvimbo dzavaienda vaigara vachiodzwa mwoyo nekushaikwa kwenyika pachirongwa chegirinhi uye vaifanira kuita nekukurumidza kana nyika dzichikwira kana kudzika mamakisi emwenje, kazhinji nenguva pfupi.
"Pamusoro pezvo, runyorwa rwemwenje-mwenje rwakasiyana nerekunze, Commonwealth uye Development Office (FCDO) nhungamiro yekufamba kuenda kune imwe nzvimbo, saka vafambi vaifanira kutarisa zvese. Kuti uwedzere imwezve dambudziko, nyika dzegirinhi-runyorwa hadzina, kana kuti dzaisave, dzakavhurika kuBrits, saka iyo system yese yakaratidza kuvhiringa zvakanyanya.
“Nekubviswa kwemuti weruvara rweamber, kuchingosara tsvuku negirinhi. Zvichiri kuzoonekwa kana danho iri richaita kuti vanhu veBritain vanoda kushanya kunze kwenyika vavimbe. "